Eldercare Deeqaha iyo Kaalmo-dhaqaaleedka Singapore Singapore / Jakarta Ka hortagga waayeelka, badhanka argaggixisada xaaladaha degdega ah, & GPS-ka ladagaallanka raadinta raadinta
Eldercare Deeqo iyo Kaalmo-dhaqaale ee Singapore
Singapore waxay la kulmeysaa dad dagdag ah oo deg deg ah, sida lagu sheegay Wasaaradda Caafimaadka. Tirada dadka waayeelka ah ee Singapore ayaa kordhay 13% 2015 waxana la saadaalinayaa in ay gaaraan 24% 2030. Dawladda ayaa hadda si firfircoon u soo dejisay lacago dheeraad ah waxayna abuurtay deeqo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin Eldercare deeqda iyo kabitaanada sida Eldershield iyo dhaqdhaqaaqa waayeelka iyo dhaqaalaha (SMF) si ay uga caawiso daryeelka caafimaadka in la gaari karo oo la awoodi karo dadka waayeelka ah ee sii kordhaya.
Haddii aad raadinayso caawimaad kharashka caafimaadkaaga, ama aad ubaahantahay caawinaad gaar ah si aad u hesho wareegga, waxaa halkan ku yaal fursado aad ku fakartid.
Qorshaha Gargaarka Naafada ee Pioneer Generation (PioneerDAS)
Qorshaha Caawinta Naafada ee Pioneer Generation (PioneerDAS) waa qayb ka mid ah Xidhmada Pioneer Generation, kaas oo sharaf u leh waxa ay Singapore ee Pioneer u sameysay dalka. Nidaamkan hoos kuqoran, dadka horay ugu naafada ah waxay heli karaan $ 100 bishii, taas oo ay u isticmaali karaan kharashyada.
Faahfaahin dheeri ah: Qorshaha Gargaarka Naafada ee Pioneer Generation (PioneerDAS)
Qorshaha Gargaarka Naafada ee Ku-meelgaarka ah ee Dadka Da'da ah (IDAPE)
Barnaamijka Gargaarka Naafonimada ee loogu talagalay Waayeelka (IDAPE) waa qorshe gargaar ah oo lagu sameeyey 2002 koox yar oo dadka waayeelka ah oo aan xaq u lahayn ElderShield waqtigaas sababtoo ah waxay ahaayeen kuwo aad u da 'weyn ama horay u jirey naafanimo hore.
Haddii dadka waaweyni ay ku yeeshaan naafonimo daran, waxay heli karaan $ 150 ama $ 250 lacag caddaan ah bishii (ayadoo ku xidhan duruufaha dhaqaale) illaa bilaha 72.
Ma jiraan wax xaddidan oo ku saabsan sida lacagta loo isticmaali karo, hadba inta loo isticmaalo daryeelka qofka naafada ah ee IDAPE. Tusaale ahaan, waxaad isticmaali kartaa lacag bixinta soo socda:
Shaqaaleynta shaqaale ajaanib ah oo ajnabi ah (FDW) oo ah caawiye si loo daryeelo codsade IDAPE naafada ah Kharashka kalkaalinta
Shaqaaleynta shaqaale ajanabi ah (FDW) oo ah caawiye si loo daryeelo codsade IDAPE naafada ah
Waxaad adigu magacaabi kartaa naftaada, daryeelahaaga oo ah 18 da 'weyn ama ka sareeya, ama guri xanaano oo aad ku nooshahay si aad u hesho lacag bixintaada IDAPE.
Faahfaahin dheeri ah: Qorshaha Gargaarka Naafada ee Ku-meelgaarka ah ee Dadka Da'da ah (IDAPE)
Hagaajinta Seniors Active (EASE)
Guriyaal ammaan ah oo raaxo leh oo loogu talagalay waayeelka
Deeqda Shaqaalaha Dibadda (FDWG)
Deeqda Guriga Dibadda (FDW) waa kaalmo bil walba oo ah $ 120 oo la siiyay qoysaska shaqaaleysiiya FDW si ay u daryeeshaan kuwa ay jecel yihiin kuwaas oo u baahan gargaar joogta ah wax ka badan seddex Waxqabadyo Nolol Maalmeedka. Soo ogow haddii aad xaq u leedahay iyo sida aad u codsan karto deeqda halkan: Deeqda Shaqaalaha Dibadda (FDWG)
Dhaqdhaqaaqa dhaqdhaqaaqa iyo dhaqdhaqaaqa waayeelka (SMF)
Ka caawinta dadka waayeelka ah inay ku noolaadaan oo ka madax banaanaadaan bulshada
Kaalmo Dheeraad ah
Mashruuca Taageerada Caafimaadka Bulshada
Nidaamkan wuxuu u suurtageliyaa waayeelka baahan iyo / ama dadka naafada ah si ay ugu helaan helitaanka daryeel caafimaad oo asaasi ah. Nidaamkan hoos ku xusan, dadka deegaanka waxay ka heli karaan daryeel caafimaad dhakhtarrada gaarka ah ee gaarka ah iyo rugaha ilkaha ee bulshadooda oo ah heerarka la kabayo.
Baro wax badan oo ku saabsan Qorshaha Caafimaadka ee Bulshada
Medifund waxay bixisaa kabid bukaanjiif ah oo aan awoodin inay bixiyaan daaweyntooda caafimaad ee isbitaalada, hay'adaha caafimaadka iyo xarumaha daryeelka. Waxay u adeegtaa sida ugu dambeeya ee bukaan socodka, inkastoo inkastoo Medisave iyo MediShield aysan awoodin inay bixiyaan kharashka caafimaadka.
Wax badan ka baro Medifund
Medisave waa nidaam kayd qaran oo caafimaad. Waxay ka caawisaa shaqsiyaadka inay qayb ka qaataan dakhligooda si ay ula kulmaan kharashka caafimaadka ee shaqsiyadeed mustaqbalka ee qoyska ama qoyska.
Wax badan ka baro Medisave
MediShield waa nidaam caymis jireed oo qatar ah. Waxaa loogu talagalay inay awood u siiso xubnaha in ay bixiyaan biilasha caafimaadka ee ka imanaya cudurrada waaweyn ee aan ku filneyn inay ku daboolaan dheelitirka xisaabtooda Medisave.
Wax badan ka baro MediShield
Kaalmo-dhaqaaleedka daryeelka muddada dheer iyo muddada-dheer
Iyadoo kharashka daryeelka dhexdhexaadka ah iyo kan muddada dheer (ILTC) uu noqon karo mid sareeya, xukuumaddu waxay bixisaa kaalmo dhaqaale oo loogu talagalay dadka baahan ee u baahan gargaarka ILTC. Kaalmadaas waxaa si toos ah loogu siiyaa adeeg bixiyayaasha ILTC kuwaas oo u isticmaali doona in ay ka saaraan biilka ay bixiyaan bukaanada u qalma.
Tusaalooyinka adeeg bixiyayaasha ILTC waa isbitaalada bulshada, guryaha waayeelka, rugaha caafimaad, xarumaha dayactir maalmeedka, iyo bixiyeyaasha adeegga daryeelka guriga.
Baro wax badan oo ku saabsan kaalmada dhaqaale ee daryeelka dhexe iyo kuwa muddada dheer​
Kala-baxa Green Bay Pluit Tower K / 23 Jabbar Utara